Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo goor dhowayd gaaray magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada caasimada u ah Puntland. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo goor dhowayd gaaray magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada caasimada u ah Puntland.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo goor dhowayd gaaray magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada caasimada u ah Puntland. .
Markii Ra’iisul wasaaraha uu gaaray magaalada Garoowe waxaa si habsami leh ugu soo dhaweeyay masuuliyiin uu ugu horeeyo madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Cali gaas,wasiiro kamid ah golaha xukuumada iyo qeybaha kala duwan ee shacabka magaalada Garoowe.
R’iisul Wasaaraha ayaa shacabka kula hadlay barxada weyn ee magaalada Garoowe halkaas oo ay ku sugnaayeen boqolaal kamid ah shacabka magaaladaasi Garoowe isagoona ka mahadceliyay soo dhweynta diiran ee loogu sameeyay Garoowe.
Previous Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaanimayo ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Asmara
Next Imaaraadka Carabta ayaa shuruud ku xirtay dhex dhexaadin laga dhex wado iyaga iyo dowladda Soomaaliya, iyagoo dalbaday in marka hore raalli gelin laga bixiyo